အဝလွန်မှာ ကြောက်တဲ့ရောဂါ -
ဘယ်လို အချက်တွေက ဒီရောဂါတွေ ဖြစ်စေနိုင်သလဲဆိုတာကို အောက်မှာ လေ့လာကြည့်ရအောင်…
-အစားအသောက်ကို ငြင်းဆန်ပြီး Diet လုပ်ခြင်း၊ -အဆာခံခြင်း
-အစာစားပြီးလဲ လက်ထိုးအန်ခြင်း၊ -ဝမ်းနှုတ်ဆေးသုံးခြင်း၊ အဆီကျဆေးများ အလွန်အကျွံသုံးခြင်း
-ဝိတ်တက်မှာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို တချိန်လုံးချိန်နေခြင်း
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ပြရမလဲ ?
Anorexia ရှိတဲ့ လူနာတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်မှာ ဒီလိုရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မသိကြပါဘူး။ ဆရာဝန်နဲ့လဲ မဆွေးနွေးချင်ပါဘူး။ အဲ့တာကြောင့် အိမ်မှာရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းမှာ ဒီလိုအပြုအမူတွေရှိနေတယ်ဆို ဆရာဝန်ကို ပြကြည့်ဖို့ဖျောင့်ဖျရမှာပါ။
ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ရှိနေမလဲ ?
အစာအာဟာရဆိုတာ ကိုယ့်ခန္ဓာအတွက် အကောင်းဆုံးဆေးပါပဲ။ အဲ့တာကို ငြင်းဆန်တဲ့အတွက် အာဟာရတွေ၊ လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တွေမဝင်တော့တဲ့အတွက် သွေးအားနည်းရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ အရိုးပွရောဂါဖြစ်ပြီး အရိုးကျိုးလွယ်လာတာ၊ ကြွက်သားတွေလျော့နည်းပြီး ပျော့တွဲလာတာ၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဓမ္မတာထိန်တာ၊ အမျိုးသားတွေမှာ လိင်စိတ်လျော့နည်းလာတာ၊ သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ရောဂါအနေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိုးရိမ်လွန်တာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့တာ၊ အရက်နဲ့ အခြားမူးယစ်ဆေးကို ပိုသုံးချင်လာတာ၊ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ကြိုးစားတဲ့အထိ ဖြစ်လာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မိသားစုဆရာဝန်ကနေ စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်တွေနဲ့အတူ တိုင်ပင်ပြီးကုသရမှာပါ။ အာဟာရအထူးကုဆရာဝန်နဲ့လဲ လိုအပ်သလို တိုင်ပင်ကုသရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့အတူ အစားအသောက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့ အားပေးကုသကြရမှာပါ။
ဒီလိုရောဂါဟာ လူထုကြားထဲမှာ ရောဂါဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိကြတာပါ။ ကုသမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်တစ်ယောက်တည်းကုလို့မရပါဘူး။ ဘေးမှာရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေက စိတ်ခွန်အားပေးပြီး ဖျောင့်ဖျဖို့လဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဝလို့ဆိုပြီး Body Shaming လုပ်တာကလဲ ဒီလိုရောဂါဖြစ်ဖို့ကို နှိုးဆွနေသလိုပါပဲ။ ဘယ်လိုအနေအထားက ကြည့်ကြည့် လူသားတိုင်းဟာ လှပပါတယ်နော်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြတ်နိုးနေရင် စိတ်ရော လူရောကျန်းမာနေမှာ အမှန်ပါပဲ။
childrenandphone #chilhealth #hopetelecare #hope #hoptelecaremyanmar